FADEEXO: Farriimihii ay Wanda Nara ku aragtay wada-sheekeysiga Mauro Icardi iyo China Suarez ee kala tagitaanka dhaliyay oo lasoo bandhigay – Gool FM
FADEEXO: Farriimihii ay Wanda Nara ku aragtay wada-sheekeysiga Mauro Icardi iyo China Suarez ee kala tagitaanka dhaliyay oo lasoo bandhigay
(Paris) 19 Okt 2021. Hadal-heynta kubadda cagta ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay gil-gilay burburka mid ka mid ah qoysaska ugu caansan ciyaartan iyadoo ay sida muuqata kala firdhadeen Mauro Icardi iyo xaaskiisa Wanda Nara kaddib markii uu laacibka kooxda Paris Saint-Germain si qarsoodi ah ula haasaaway atariishada model-ka ah ee China Suarez.
Suarez ayaa dafirtay misena iska fogeysay in lagu eedeeyo masuuliyadda burburka qoyskan reer Argentina inkastoo la fahansan yahay inaysan taasi ku beer-laxawsan karin Icardi iyo Wanda.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladdan ayaa bannaanka timid Sabtidii kaddib markii ay Wanda Nara soo dhigtay barteeda Instagram qoraal ay Icardi iyo ku tilmaameysay inuu qoyskan u burburiyay naag xun darteed, waxayna u raacisay inay asxaabteeda ka saarto isaga iyo gabadha model-ka ah ee ay isku dalka kasoo jeedaan.
Barnaamijka ka baxa TV-ga ee Los Angeles de la Manana ayaa haatan baahiyay qayb ka mid ah farriimihii ay ku wada sheekeysteen weeraryahanka PSG iyo China Suarez kuwaasoo ay heshay Wanda kaddibna dhaliyay inay ka tagto, waxaana farriinta la baahiyay ay u dhignayd: “Maalin uun waan inaan baxnaa oo aan isu galmoonaa weliba meel dunida ka mid ah oo aysan iyagu ogeyn” iyadoo lagu soo warramayo inay China usoo dirtay Icardi.
Waxaa intaas dheer in haweeneyda la yiraahdo Yanina Latorre oo wax ku qorta El Trece ay xaqiijisay in sheekada ay ka billaabatay Icardi oo xaaskiisa weydiiyay inuu fiiriyo farriimaheeda qaaska ah kaddibna ay aqbashay iyadoo shuruud kaga dhigtay kaliya inay iyaduna kuwiisa gaarka ah fiiriso, waxaana sida ay Yanina sheegtay Wanda ay halkaas ku aragtay wada-sheekeysigii dhaliyay burburka qoyskan.
Manchester City oo Barcelona ogeysiisay qiimaha ay ku iibineyso Raheem Sterling